दशैं फेष्टको आम्दानीले सामाजिक सेवा गर्छौ : संयोजक मनिस - arthamandu
गृहपृष्ठ दशैं फेष्टको आम्दानीले सामाजिक सेवा गर्छौ : संयोजक मनिस
असोज २०, २०७५ |
बडा दशैको अवसर पारेर ललितपुरको कुपण्डोलमा स्थानीय गणेश युवा क्लबले दशै फेष्टको आयोजना गरेको छ । शुक्रबारदेखि कुपण्डोलको बागमति नदी किनारामा शुरु भएको दशै फेष्ट आइतबार सम्म चल्ने आयोजक संस्था गणेश युवा क्लबले जनाएको छ ।
दशै फेष्टमा मुलुकका चर्चित गायक तथा कलाकारहरुले प्रस्तुति दिएका छन् । केहि वर्षदेखि निस्कृय जस्तो देखिएको गणेश युवा क्लबले यस वर्ष देखि सक्रियता देखाएर यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना हुने क्लबले जनाएको छ ।
क्लबले आयोजना गरेको दशै फेष्ट कार्यक्रमकाबारेमा कार्यक्रम संयोजक मनिस रञ्जितकारसँग अर्थमाण्डू डटकमको टोलिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः
केहि समयदेखि निस्कृय देखिएको गणेश युवा क्लब अब पुनः सकृय भएको हो ?
निश्चय पनि । केहि समयदेखि हाम्रो गणेश युवा क्लब निस्कृय जस्तै भएको थियो । अब भने त्यस्तो हुँदैन । हामी अब क्लबलाई सकृय रुपमा अघि बढाउनेछौं ।
गणेश युवा क्लब भनेको गैर नाफामूलक संस्था हो । यो क्लबले विशुद्ध सामाजिक कार्यक्रमहरु गर्नेछ । हामीले यसपाली दशैको अवसर पोरेर शुक्रबारदेखि दशै फेष्टको आयोजना गरेका छौं ।
दशै फेष्ट कस्तो भइरहेको छ त ?
दशै फेष्ट एकदम राम्रो चलिरहेको छ । हामीले यो महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गराउनका लागिपरेका छौं । हाम्रो टिम सक्रिय छ । हामी सबै मिलेर यसलाई सम्पन्न गराउदैछौ ।
शुक्रबार हाम्रो कार्यक्रम केहि ढिला गरी शुरु भयो । व्ययवस्थापन लगायका धेरै कामहरु थिए । हामीले शुक्रबार फ्रि पासको व्यवस्था गर्यौ । जेहोस शुक्रबार भने भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
भनेपछि शनिबारका लागि टिकेटिङको व्यवस्था गर्नु भएको छ हो ?
हामीले शुक्रबार पहिलो दिन भएकाले पनि निुःशुल्क प्रवेश दियौ । शनिबार भने भने हामीले टिकट शुल्क लिनेछौ. । जेहोस धेरै महंगो छैन । जम्मा एक सय रुपैयाँ मात्रै हामीले राखेका छौं ।
पहिलो दिन त राम्रै दर्शक आए भन्नु भयो, शनिबार र आइतबार कत्तिको दर्शकहरु आउने अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
पहिलो दिन कार्यक्रम राम्रो भएको हामीले ठहर गरेका छौं । पहिलो दिननै दर्शकहरुको राम्रो उपस्थिति देखियो । कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुति रहनेछ । चर्चिच–चर्चिट स्टारहरुको दमदार प्रस्तुति हुने हुँदा दर्शकहरुको साथ सहयोग राम्रो हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
कार्यक्रममा कुनकुन कलाकारहरुको प्रस्तुतिको हुँदैछ, यसको बारेमा बताइदिनोस् न ।
कार्यक्रममा लाहुरे, सुगम पोखरेल, राधिका हमाल, डान्स रिया श्रेष्ठ, अर्की डान्सर प्रसन्ना पाण्डे, कुबेर खड्गी लगायतको दमदार प्रस्तुति रहनेछ ।
यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो ?
यो कार्यक्रम हामीले ललितपुरको कुपण्डोललाई चिनाउन र हाम्रो गणेश युवा क्लबलाई जागरुक गराउन पनि आयोजना गरेका हौ । यो हाम्रो च्यारिटी पनि हो । हामीले आम्दानी भएको रकमबाट ललितपुरको सानेमा रहेका ज्येष्ठ नागरिब आमाबुवाहरुलाई सहयोग समेत गर्ने छौं ।
यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि तपाईहरुलाई क–कसले सहयोग गरेको छ ?
हाम्रो मूख्य प्रयोजक भनेको टुबर्ग हो । त्यपछि हामीलाई स्पोन्सर गर्ने अर्को कम्पनी हाइल्णडयडर ह्वीस्की छ । सपोर्टेड बाईमा सिप्रदी ट्रेडिङ तथा नाइटिंगेल स्कूलले सहयोग गरेको छ ।
पछिल्लाे - उदयपुरकी १७ वर्षीया युवती बेपत्ता, सहयोगका लागि सबैले शेयर गरौ
अघिल्लाे - हिंसा रहित तारकेश्वरका ३ वटा नमुना परिवार